मद्यपान मेरो समस्या « Power to Change Nepal
मेरो नाम श्याम चौलागाई हो। म, मेरो श्रीमती लक्ष्मी र तीन छोराको सानो संसार छ। आठ बर्षअघि म एक निजी कम्पनीम खरिदार सरहको पदमा कार्यरत थिएँ। यो कम्पनीम विदेश आध्ययनमा स्टुडेन्ट पठाउने सिलसिलमा कतिपयस्रोत्बाट कमिशन पाउन सकने भयो। आठ बर्षअघि फुर्मासी हजार, पन्ध्र सय रुपैयाँ हातमा पर्दा हामी स्टाफहरु गमक्क बन्यौ। “जाओं मोज जरौं”, भनि हामी महंगो होतलतिर छिर्न लाग्यौं। त्यसबेला मेरो अनी घर, परिवारको जीवनको पाटन सुरु हुँदैछ भनी मलाई थाहा भएन। साथी, भाईसँग ख्याल ठट्टामा सुरु गरिएको मधपान हेर्दाहेर्दै मेरो निम्ति श्रीमती, र साना बालकहरुभन्द पनि प्यारो वस्तु हुनलाग्यो। जुन कुरो मेरोकोही थिएन, त्यही मेरो सब थोक। जीवनकै अभिन्न अङ्ग बन्न लग्यो। मधपानले ढ्रुत गतिमा मलाई मान्छेको स्तरदेखी गिराइरहेको कुरो पनि मलाई ख्याल भएन। कम्पनीमा हात लागेको कमिसनले मेरो जीवनलाई अर्कै धारामा बगाउन लाग्यो। जो कतै ठोकिएर चकनाचुर बन्नेछ। समाजमा मेरो पहिचान जंड्याह र ट्वाके बन्न थाल्यो, मलाई कुनै पर्वाह थिएन। तलतलले सताउन थालेपची मैले जसरी पनि त्यो पाउनै पर्ने भयो। पछी मलाई विहनैदेखी चाहिने भयो। सन्तुलित बनी उभिन र बोल्न सक्नको लागि मलाई रक्सी सेवन गर्नु पर्ने भयो। नत्र म कमै नलाग्ने, हात काँप्ने, बोली नफुट्ने, विरामीजसतै बन्थें।
यो कुआदतको सीधा असर मेरो परिवारलाई पर्नगयो। पहिले त घरमा थोथोरै भए पनि खर्चपात पुर्‍याउँथे। अब अन्त्यमा आएर मैले घर, परिवार, बालबच्चा र श्रीमतीलाई भुल्न थालें। मेरो ध्याउन्न केवल रक्सीको बोतल र रक्सीको स्वादमा केन्द्रित हुन्थ्यो। मेरो आमदानीले मेरो परिवारको सम्पूर्ण खर्च मैले पुर्‍याउँदै आएको थिएँ। तर पूराका पूरा तलब अब रक्सीमाथि खनिन लागेपछि स्थिति धेरै बिग्रेर गैसकेको थियो। टोल, छिमेकमा हाम्रो परिवारको इज्जत मैले धूलोमा मिसाउन लागेको थिएँ। हाम्रो सानो घर–परिवार एउटा शान्त परिवारबाट महा कचिङ्गले घरमा परिणत भयो। दिनरातको झगडा र अशान्तिको निम्ति हाम्रो घर बदनाम बनिसकेको थियो।
यसरी मेरो स्थिति जटिल बन्दै गयो। पछुतो मान्ने र सुध्रने काम मबाट हुन असम्भव थियो। रक्सीको बन्धनमा यसरी कसिएको थिएँ कि मेरो जागिर नै खतरामा परिसकेको थियो। झगडामा फसें, कुटाइ खाएँ, मेरो शरीरभरि दाग, खत र चोटको साँधी थिएन। सपनामा हिँडरहेको जस्तो मेरो जीवन वास्तविकता र व्यावहारिकतादेखि बिलकुल चुँडिएको अवस्थामा थियो। बालबच्चा र श्रीमतीको अस्तित्वसमेत भुलेर अन्धकार बेहोशीमा डुबेको बेलामा मेरो कम्पनीले मलाई बर्खास्त गर्‍यो। मैले म आफैसमेत सम्पूर्ण परिवारलाई आर्थिक खाडलमा जाके।
घरमा कति वर्ष लाएर जोडजाम गरेका बहुमूल्य सामानहरू बेचिने क्रम सुरु भयो। कलर टिभि, डिभिडि प्लेयर, पितलका करूवाहरू, अरू भाँडाकुडाको साथै अन्त्यमा गरगहनाहरू सबै गरी जम्माजम्मी दुई लाख रूपियाँ मैले जाँड रक्सीमा खुरूखुरू बगाएँ। यो आदतले मान्छेलाई यतिसम्म मूर्ख पशु बनाउनु सक्दो रहेछ। एक दिन म समाजको अघि एक भलाद्मी थिएँ भन्ने कुरो मैले भुलें। म छिछि, दूरदूरको एक घीनलाग्दो पात्र बनिसकेको थिएँ।
अब मेरी श्रीमतीको निम्ति अर्काको घरमा भाँडा माझ्नु, कपडा धुनु अनि घरको सरसफाइ गरी केही कमाउनु सिवाय अरू उपाय रहेन। मैले आफैलाई गिराएँ र आफ्नो छँदाखँदाको सुखी परिवारलाई पनि अवहेलित बनाएँ। मद्यपानले यस्तो नतिजा र प्रतिफलमा मानिसलाई पुर्‍याउनसक्छ भन्ने जानकारी दिएर पाठकलाई सचेत, सजग गराउनलाई पनि म यसरी सविस्तार यी सबै बताइरहेको छु। मद्यपान कुनै पनि अर्थमा ठीक छैन। आर्थिक, नैतिक, सामाजिक सबै तहमा यसले मान्छेलाई मान्छेको स्तरदेखि धेरै तल सडक र नालामा गिराउँदो रहेछ।
मेरी श्रीमती जो घरको खर्च धान्नको लागि दु:ख साथ मेहनत गरिरहेकी थीन्, उनलाई दुई वृद्ध महिलाहरूले हाम्रो घरैमा आएर प्रभु येशूको बारेमा बताउने गर्नुहुन्थ्यो। उनीहरू केके भनी गुनगुन गर्थे, म एक कुनामा कि मातेर, कि रक्सीको सोचमा डुबिरहेको हुन्थें। येशू मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र बचाउन चाहनुहुन्छ भन्ने सन्देशहरू सुनेर श्रीमतीको मनमा प्रभाव परेछ। ती आमाहरूले उनलाई सुनाएको अर्को खुशी र आशाको सन्देश मेरी श्रीमती लक्ष्मीको लागि यही थियो कि प्रभुमा विशवास गरेर प्रार्थना गरेको खण्डमा यो कुआदतबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ। मलाई लक्ष्मीले चर्च जाऔं, हेरौं भनी अनुरोध सुनाइन्। न मलाई चर्चसंग मतलब थियो न मलाई मन्दिरसंग चासो थियो। रक्सीको खोजी, खाँचोमा दिनरात डुबेर बस्ने मानिस मैले त श्रीमतीलाई एक धक्का दिएर परतिर पठाइदिनुपर्ने थियो। तर अचम्म भो। किन हो, कुन आत्माले हो? कसरी हो? तर मलाई उसको कुरो मन पर्‍यो। हामी चर्च, मण्डलीको सभामा गयौं र त्यहाँ मानिसहरूले मेरो जीवनमा सरोकार राखेको मैले देखें।
सबैको मदत र प्रार्थनाको फलस्वरूप ४,५ महिनाको अन्तरालमा नै मैले त्यो घृणित आदतबाट छुटकारा पाउन सकें। प्रभु येशूमा भएको अलौकिक आनन्द र शान्तिले मेरो मनमा राज्य गर्नथाल्यो। म छक्क परें। “देखनुभो त?” भनी लक्ष्मीले मलाई मुस्कुराएर सोधिन् अनि म छक्क परे “हो” भनेर शिर हल्लाउन बाहेक केही गर्न सकिनँ। कारण साँच्चै मेरो जीवन परिवर्तन हुन लागेको थियो। रक्सी र त्यसको प्यासले थुनिएको अन्धकार कोठाबाट म साँचो उज्यालोमा आउन लागेको थिएँ। हो, मैले जीवित प्रभु येशूको शक्ति र प्रेमलाई देखे। मेरै जीवनमा देखें।
जीवनका सबै संघर्षहरू मेटिएर गएका छैनन्। आर्थिक अवस्थाको चुनौती मेरो जीवनमा सजिव छ, दुई बूढाबूढी मिलेर घर व्यवहारलाई समालेका छौं। अशोक, पुरण, अमन मेरा तीन छोराहरू, लक्ष्मी र म मिलेर जब प्रभुको भजन–गीत गाउँछौं आज टोल छिमेकहरू छक्क पर्छन्, जुन घरमा रातदिन हल्ला र झगडा हुन्थ्यो आज त्यहाँ शान्ति छ, प्रभु येशूको प्रेमको संगीत सुनिँदैछ भनी उनीहरू छक्कै पर्दाहुन्। यो साँचो हो मैले मेरो जीवनको परिवर्तन प्रभु ख्रीष्ट येशूमा पाएँ अनि यस्तै परिवर्तन सबैको लागि उहाँमा उपलब्ध छ भनी म विशवास गर्दछु।
श्याम चौलागाईको भिडियो गवाही: